Iyunithi Ezimele Ezimele ngaphansi kwe-Beach House - I-Airbnb
Iyunithi Ezimele Ezimele ngaphansi kwe-Beach House
Dicky Beach, Queensland, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Wayne, Susie, Charlee & Blair
U-Wayne, Susie, Charlee & Blair Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala ekhanyayo futhi enemibala, ejabulisayo, eyimfihlo nenethezekile e-Dicky Beach enombhede olingana nenkosi, i-aircon, igceke langasese, izingadi ezinhle kanye eduze namabhishi. Amamitha angama-50 kuphela ukuya e-Tooway Lake, ama-200m ukuya emabhishi okuntweza (i-DickyMoffat Beaches) kanye namakhefi, izindawo zokudlela nezitolo, i-Dicky Beach SLSC kanye nezindlela ezinhle zokuhamba nokuhamba ngamabhayisikili zaseCaloundra.
Yindlu yasogwini ejabulisa kakhulu futhi enemibalabala kakhulu, eneyunithi ehluke ngokuphelele futhi iyimfihlo ngokuphelele endlini, etholakala ngaphansi kwendlu ebhulokhini elithambekele kancane. (Qaphela ukuthi kungase kube khona umsindo wethrafikhi ohamba ngezinyawo osuka endlini phezulu.)
Indlu iyi-fibro "umjondolo wasebhishi" ovuselelwe kabusha futhi iyunithi iyisengezo esisha kakhulu. Inakho konke ukunethezeka kwezidalwa nokunye okuningi... sinaka imininingwane ukuze sizame ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise ngangokunokwenzeka.
Kuthule futhi kunethezekile nomoya oheleza kamnandi wasolwandle. I-air conditioner entsha yomjikelezo oyihlane ifakwe lezo zinsuku ezishisayo nobusuku obupholile. Kukhona abalandeli abengeziwe abahlinzekiwe.
Khetha incwadi emtatsheni wezincwadi futhi unethezeke esihlalweni esikhulu sebhentshi noma embhedeni ongaphandle wosuku kuvulandi. Kukhona netafula nezihlalo ezihlala ezine kanti nezingadi nomoya ohelezayo, kuyindawo ethandekayo ukujabulela ukudla, noma ukusebenzise njengendawo yedeski/yokusebenzela.
Igumbi lokugezela liwumsebenzi wobuciko ongaphansi kwamanzi onesitezi esinamathayela we-mosaic emangalisayo kanye nesitsha esihle sakudala esikhulu.
Ikhishi elisha elihle linendawo yokulala yamatshe enezihlalo komunye umkhawulo, amakhabethe amaningi nendawo yokubeka izinto zakho, ifriji entsha ephindwe kabili kanye necombo yesiqandisi, izindawo zokwenza itiye nekhofi, itoaster, isandwich press/grill, ipani likagesi, iblender yokunyakazisa, iprosesa yokudla, i-slow cooker, i-microwave (i-oven ye-convection iyeza maduze) nosinki, izitsha ezinhle nezitsha zengilazi, zonke izitsha nezinto zokusika ozidingayo, kanye nokunye okwengeziwe ukuze wenze ukuhlala kwakho kube lula ngangokunokwenzeka (usawoti nopelepele, ukugoqa okujabulisayo ne-foil , izitsha nezitsha).
I-Super comfy King size bed enelineni elihle lekhwalithi (amashidi wokubala wethread angu-1000) nombhede osofa ababili, ukuze ulale kufika ku-4 isiyonke. (Kanye ne-daybed ephindwe kabili kuvulandi uma uzizwa uthanda ukulala ngaphandle).
Jabulela imibala egqamile, umsebenzi wobuciko ojabulisayo nomuzwa we-beachy.
4.80 · 273 okushiwo abanye
I-Moffat Beach idume phakathi kwabatshuzi ngamakhefu ayo amade, futhi inezindawo zokudlela ezinhle ezikhethiwe, amapaki ezingane, nezindawo ezinkulu zamapikiniki zonke ezinokubukwa okumangalisayo nomoya oheleza kamnandi wasolwandle.
I-Dicky Beach yaqanjwa ngomkhumbi i-SS Dicky. I-Surf Club igada ulwandle futhi inokudla okumnandi, kanti i-Dicky Beach inezindawo zokudlela eziningi, amakhefi nezitolo ongakhetha kuzo.
I-Dicky Beach kanye nenyakatho ukuya e-Currimundi naseningizimu ukuya e-Moffat Beach iyindawo ewumbukwane yolwandle oluhle olunesihlabathi esinamachibi okubhukuda, inqwaba yezindawo zokungcebeleka ezithandwayo namapaki amahle anama-BBQ amahhala nezindawo zamapikiniki ezimboziwe.
Phakathi kwe-Dicky ne-Moffat kune-Tooway Lake, indawo ethize eyimfihlo necashile abantu bendawo kuphela abazi ngayo. Ichibi liyanyakaza futhi lithandwa ngempela izingane ezincane nabantu abadala abafunda ibhodi le-Stand Up Paddle.
Ibungazwe ngu-Wayne, Susie, Charlee & Blair
Uma & uma sisekhaya, sikhona ukuze sisize. Ngicela ukubuza. Ngaphandle kwalokho sisuke singekho ucingo nje.
UWayne, Susie, Charlee & Blair Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Dicky Beach namaphethelo